» सडक र सदनबाट राजतन्त्र फर्काउछौं भन्दै कुर्लिए कमल थापा, के जनताले साथ देलान् त ? सडक र सदनबाट राजतन्त्र फर्काउछौं भन्दै कुर्लिए कमल थापा, के जनताले साथ देलान् त ? – हाम्रो खबर
काठमाडौं, १५ मंसिर । राप्रपा अध्यक्ष क¥मल थापाले सडक र सदनबाट संघर्ष गरेर नागार्जुङमा रहेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा ल्याउने उ¥द्घोष गरेका छन् ।
पार्टीको एकता महा¥धिवेशनलाई सम्वोधन गर्दै जनमत नभएका कारण अहिलेसम्म राजतन्त्र फ¥र्काउन नसकेको भन्दै उनले सडक र सदनको जनमतबाट राजतन्त्र फर्काउने उद्घोष गरे ।उनले राप्रपाले राजा आउ देश बचाउ भन्ने नारा छाडेर जनता आउ राजा ल्याउ भन्ने नारा लगाउने बताए ।
उनले आफ्नो कार्य¥कालको सुरुमा पार्टी एकता कायम राख्न नसकेकोमा क्षमा मागेका छन् भने आफ्नै कार्यकालमा एकता गर्न सकेकोमा गर्व गरेका छन् ।उनले आ¥गामी निर्वाच¥नमा पार्टी संसद र सरकारमा पार्टीको राम्रो उपस्थिति हुने दाबी पनि गरे । विगतमा कांग्रेससँगको सहकार्यमा धोका भएको समेत बताए ।
यो पनि,,,ओलीले चाहेकै जस्तो एमालेमा हार्डलाइनर टिम,,,,काठमाडौँ । चितवनमा मंगलबार सम्पन्न एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट अ¥ध्यक्ष केपी ओलीले चाहेकै जस्तो कठोर (हार्डलाइनर) टिम बनेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि महासचिवसम्मको कार्यकारी टि¥मलाई हेर्ने हो भने समन्वयकारी धार छायामा परेको छ। यसले ओलीलाई पार्टीभित्र शक्तिशाली बनाएको छ।